Nyocha zuru ezu na nyocha nke onye mbipụta 3D BQ Witbox 2 | Akụrụngwa n'efu
BQ banyere na 3D obibi akwụkwọ ahịa 3 afọ gara aga na-ekwuwapụta rebranding nke Makerbot replicator 3 2D na ngwa nbipute. Ọnwa ole na ole ka ọkwa ahụ gasịrị, ha kagburu ọrụ ahụ. Ha nwara iwere obi ike ma weputara ngwa nbipute nke aka ha, BQ WITBOX. N'afọ ndị sochirinụ ha gosipụtara a nyocha (CICLOP) y a ngwa nbipute izukọta onwe gịHEPHESTOS).
Na 2016, ha weputara ihe omuma nke ndi nbipute. Akụrụngwa nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere nsụgharị mbụ ha. Taa anyị na-enyocha ndị kasị ibu ya, ndị Igbe BQ WIT 2.
The BQ Witbox 3 2D ngwa nbipute bụ a Ihe nbipute 3D nke Cartesian na-eme ka echiche site FDM. You nwere ike iji a dịgasị iche iche nke 1.75mm filaments gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụrụhaala na nbipute gị achọghị akwa dị ọkụ
N'adịghị ka ndị na-ebi akwụkwọ ndị ọzọ n'ahịa, onye nbipute a eji elektrọnik emepụtara ma mepụta site na BQ, 100% Arduino dakọtara. O nwekwara ihe ndi mmadu ji aka ha mee nke oma.
2 Akụkụ nka na ụzụ nke nkọwapụta BQ WITBOX 3 2D nbipute
2.1 Mbipụta nha, ibu ibu na mpaghara
2.2 Ọsọ na mkpebi
2.3 BQ emepụtara extruder
2.4 Akụkụ ndị ọzọ
2.5 Njikọta, ọrụ kwụ ọtọ na sistemụ arụmọrụ na-akwado
3 Unboxing na nzukọ nke BQ WITBOX 3 2D ngwa nbipute
3.1 Ọkwa na-ewu n'elu ikpo okwu
3.2 Gbanwee ihe mkpuchi ahụ maka mbadamba ihe.
4 BQ WITBOX 3 2D ngwa nbipute zuru ezu
4.1 Site na faịlụ STL gaa GCODE
4.3 N'oge ibi akwụkwọ
4.4 Mbipụta mkpọtụ larịị
4.5 Bipute ogo na njehie.
4.6 Mgbe-sales ọrụ na nkwado site na Onye kere obodo
5 BQ filament na filaments site na ụdị ndị ọzọ.
Anyị ga-atụle ụfọdụ njirimara nke ngwaahịa a na ndị asọmpi na njirimara yiri nke a:
Anyị na-ahụ na onye nrụpụta ahụ jisiri ike tinye ngwaahịa ya nke ọma maka asọmpi ahụ nwere ezigbo ego.
Manufacturersfọdụ ndị nrụpụta gosipụtara n’oge na-adịbeghị anya ụdị ngwa ọrụ ọhụụ na-etinye atụmatụ ọhụụ pụtara ọhụụ dị ka Wi-Fi ma ọ bụ onye nrụpụta abụọ, mana n’agbanyeghi nke a, onye nbipute BQ WITBOX 3 2D ka bụ ezigbo nhọrọ.
Akụkụ nka na ụzụ nke nkọwapụta BQ WITBOX 3 2D nbipute
Mbipụta nha, ibu ibu na mpaghara
Na ngwa nbipute bu ihe akuru. Ọ gafeela 30 kilos Ha na-egosi na ọ ga-efu gị nke gị iwepu ya na igbe ahụ mgbe ị na-adọpụ ya ma bulite ya na tebụl ma ọ bụ arịa ụlọ nke ịhapụ ya tinye. Ihe mere na 90% nke chassis nke ngwa nbipute bu ígwè, ọ dị ka tank. Iji tinye a ebe obibi akwụkwọ buru ibu ( 297X210X210 mm) a choro inwe onye nbipute inwe mmesapụ aka, 508x485x461 mm na-agụtughị eriri igwe na nkwado ya.
Ọsọ na mkpebi
Na nke a oru akụkụ na ngwa nbipute guzo nnọọ, inwe ike ibipụta na mkpebi ruru 20 microns na ọsọ ọsọ ruo 200 mm / s. Anyị nwere otu pụrụ iche nke na-agaghị ata ụta ihe ọ bụla anyị bu n'obi ibipụta. Anyị ga-amachi ụkpụrụ ndị a naanị mgbe anyị jiri ụfọdụ filaments ụfọdụ, dị ka filament na-agbanwe agbanwe nke a na-atụ aro ka ebipụta karịa 60 - 80 mm / s
BQ emepụtara extruder
El onye ntanye na sistemụ “Double Drive Gear” nke BQ mepụtara bụ ezigbo akụrụngwa dị mma nke anyị bipụtara na ihe niile anyị nwere ike ịnweta (ị ga-ahụkwa n'isiokwu ndị ọzọ na blọọgụ a), filament, osisi, cork, filament na-agbanwe agbanwe, PETG ...
Nke a extruder incorporates sprockets na abụọ nke filament ntọt traction nke a na-eme site na ịdọrọ ihe ahụ banye na hotend. Ọzọkwa webatara PTFE tube (teflon) nke na-ebelata esemokwu nke filament na mmegharị ya na hotend nke ga-eme ka filament ahụ ga-ekpo ọkụ naanị ozugbo ewebatala ya na hotend. Ihe mgbakwunye ndị a niile na-ahụ na enweghị mgbochi ga-ebi akwụkwọ n'agbanyeghị filament anyị ji.
Ndaghachi azụ nke usoro ihe a bụ na tube Teflon anaghị eguzogide okpomọkụ karịa 240 aboveC ya mere, ebipụtaghị mbipụta ABS na filaments chọrọ ọkụ dị elu.
Site n'oge ruo n'oge ị ga-eji dochie PTFE tube n'imeKa o sina dị, ọ bụ usoro dị mfe agaghị ewe karịa 10 nkeji. Agbanyeghị, ọtụtụ awa nke ibi akwụkwọ ga-ewe tupu ịme akpa nnọchi mbụ.
N'ụwa ebe ihe niile na-eburu ihe niile, ọbụlagodi na anyị anaghị eji ọkara nke ọrụ ngwaahịa emechaa, ọ bụ ihe ijuanya na onye nrụpụta etinyeghị akwa na-ekpo ọkụ na njirimara nke BQ WITBOX 2. Mgbe emechara n’isiokwu a, anyị ga - akowa ihe banyere ihe enwere ike ịbipụta ma ọ bụrụ na anyị enweghị kọmputa nwere akwa dị ọkụ.
Na ngwa nbipute nwere atụmatụ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ihe niile na-ebelata ka ogologo ahịrị. Nnukwu ogwe uzo na-acha ọcha methacrylate osisi on niile anya ihu otu na a ahụ wuru ígwè pụrụ iche e mere maka anyị nwere ike ịkwakọba ọtụtụ otu ndị na-ebi akwụkwọ.
Ọzọ isi na-enwe ekele maka ya bụ na ha na-enwe ike chepụta set mere Enweghị eriri ọ bụla, nsonaazụ dị ezigbo ọkachamara.
Ọzọkwa webata mkpọchi ya na igodo na ọnụ ụzọ nke na-enye ohere ịbanye nke onye nbipute, nkọwa bara uru karị ma ọ bụrụ na anyị ga-achọta onye nbipute a n'otu ebe enwere ụmụaka ma ọ bụ ndị ọzọ na-amaghị ihe E kwesịghị idozi ime nbipute n'oge ibi akwụkwọ.
Ọ bụ ezie na ngwa nbipute nwere COM ọdụ ụgbọ mmiri cThezọ kachasị mma iji mee ya bụ site na ibipụta faịlụ GCODE depụtaghachiri ozugbo na kaadị SD.. Ngosipụta nke jikọtara onye nbipute ahụ gụnyere menu dị mfe ma na-enweghị nghọta site na nke anyị ga-esi rụọ ọrụ niile dị mkpa maka iji ya.
Anyị enwewo ike ijikọ onye nbipute ya site na ọdụ ụgbọ mmiri COM ma mee ka anyụike ahụ, mana mmegharị ahụ enwetaghị dị ka nke ahụ sitere na menu nke akụrụngwa n'onwe ya.
Unboxing na nzukọ nke BQ WITBOX 3 2D ngwa nbipute
N'ihi nha na ịdị arọ nke ngwaahịa a, nkwakọ ngwaahịa nwere sistemụ mmeghe dị ka nke telivishọn dị ugbu a. Tụgharịa ụfọdụ nkwado wee dọrọ igbe ahụ elu. Anyị na-ahụ na onye nbipute anyị echekwara nke ọma ka o wee rute n'ọnọdụ zuru oke yana igbe nke gụnyere ngwa dị iche iche (ụfọdụ ọbụlagodi 3D ebipụtara) yana akwụkwọ ntuziaka akwụkwọ gbara ọkpụrụkpụ.
Anyị na-achị ozugbo ịgụ akwụkwọ ntuziaka ka ịA ngwa internet search maka iji iji na ngwa nbipute.
BQ nwere ọwa Youtube nke anyị na-achọta vidiyo maka ọrụ ndị a na-ahụkarị nke anyị ga-arụ na WITBOX 2, anyị chọtara vidiyo kwesịrị ekwesị na naanị n'okpuru 15 nkeji anyị ewepụlarị onye na-akwụghị ụgwọ site n'ụgbọ obibi akwụkwọ, tinye n'akụkụ akụkụ, nkwado filament na anyị na-egwuri egwu na ngwa nbipute iji meziwanye akụrụngwa.
Iji vidiyo ọzọ BQ nwere na ọwa YouTube, anyị na-eme mmezi ndị dị mkpa.
Emeela site na ịtụgharị 3 kposara. Enwere ike iji aka mee ihe ahụ na-enweghị mkpa maka ngwaọrụ ọ bụla na naanị na anyị kwesịrị ịmata mgbe onye nbipute dugara na-agbagharị.
Gbanwee ihe mkpuchi ahụ maka mbadamba ihe.
Nzọụkwụ a amachaghị, ị ga-enwerịrị mezie ọdịiche dị n'etiti ọnụ na-ewu efere nke mere na mgbe na-ebi akwụkwọ a oyi akwa nke ihe onwunwe nke a kpọmkwem ọkpụrụkpụ i nwere nnọọ ezu ohere. Ọ bụrụ na anyị ahapụ obere ohere, ihe onwunwe ga-agbakọta na oghere ahụ na-akpata, n'etiti ihe ndị ọzọ, jams, ọ bụrụ na anyị ahapụ ọtụtụ ihe agaghị eme nke ọma n'etiti ọkwa. Mgbe ọtụtụ ule gachara na nyocha ịntanetị sara mbara anyị kwenyesiri ike na nhọrọ kachasị mma bụ itinye mpempe akwụkwọ gram 80 n'etiti oghere na isi ya ma belata ebe dị anya ruo mgbe anyị nwere nsogbu iji aka anyị mee mpempe akwụkwọ ahụ.
Otu ihe ikpeazụ ị ga-eme tupu ebi akwụkwọ, ị ga-enye ya a ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị maka ebe obibi akwụkwọ. Uwe dị ọnụ ala Nelly lacquer O zuru ezu iji nweta ihe edepụtara iji soro ọtụtụ mbipụta (ọ ga-emegharị tupu mbipụta ọ bụla ma hichaa isi nke ngafe ọ bụla 10 Mbipụta ma ọ bụ karịa). Agbanyeghị anyị na-adụ gị ọdụ Iji chefuo nsogbu nsogbu ọ bụla, jiri BRIM nhọrọ nke Cura. A ga-agbakwunye obere oyi akwa nke millimita ole na ole na echiche nke gburugburu nke ibe ahụ, na-emefue obere ihe ma na-eme ka ọhụhụ nke ibe ahụ sie ike.
Ebe ọ bụ na anyị ewepụtala ebe obibi akwụkwọ ruo mgbe anyị malitere ibipụta ihe mbụ anyị, obere oge awa agafeela.
BQ WITBOX 3 2D ngwa nbipute zuru ezu
N'akụkụ a, anyị ga-achọsi ike ma chọọ ogo ogo na nkọwa nke nwere ike iyi oke. N'otu aka ahụ, njirisi eji eme ihe dị oke mkpa ma ikekwe ị kwenyeghị na nkwubi okwu anyị ọ bụla, hapụ anyị echiche gị na nkọwa.
Ebe ọ bụ na Ndị na-ebipụta 3D Ha bụ akụrụngwa dị arọ nke, dabere na ogo iwu, ha nwere ike iweta mkpọtụ n'oge ibipụta ha, a ga-etinye ha n'elu ala siri ike yana ohere zuru oke.
El nkwado maka filament spoolsma ọ bụ dị na azụ nke ngwa nbipute a na-ewebata filament ahụ site na oghere nke na-esi na tube plastic na-eduga ihe na extruder. Teflon tube nke si na eriri igwe gaa na onye na-eme ihe na-eji fibonacci eme ihe mgbe niile iji chọpụta ụzọ ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ohere zuru ezu, ihe ngwọta a dị ezigbo mma yana ịrụ ọrụ, ọ bụrụ na ọ megidere gị dịka anyị chọrọ ịbelata omimi nke onye nbipute ka o kwere mee, ị ga-ahọrọ ibipụta nkwado iji debe ya eriri igwe na na ngwa nbipute. Faịlụ .stl maka ibipụta usoro a maka onye ọ bụla na weebụsaịtị webụsaịtị.
N'otu ụzọ ike USB. Ọ na-abanye na ngwa nbipute n'akụkụ aka nri, ọ bụrụ na onye nrụpụta ahụ nyere eriri nke nwere ogo ogo 90 na akụrụngwa ahụ, anyị ga-enweta centimita ole na ole.
Site na faịlụ STL gaa GCODE
Faịlụ na ngwa nbipute eji ebipụta ihe ndị ahụ bụ GCODEe. Yabụ, dị ka ọ dị na ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ na ahịa ọ ga-adị mkpa iji ụfọdụ sọftụwia laminator iji gbanwee usoro a ma ama STL gaa GCODE . N'ọnọdụ anyị anyị ejirila Cura 2.4 nke nwere ezigbo nsonaazụ, mana anyị nwere nhọrọ ndị ọzọ dịka Slic3r, Simplyfy3D, skeinforge…. Ihe ngwanrọ di iche iche nke di taa bu na anyi nwere ike inyefe akwukwo iji kwuo okwu banyere ya, Bq achoputaghi imeputa ngwanrọ nke aka ya.
Ozugbo anyị tinyere kaadị SD n'ime ngwa nbipute ya na faịlụ GCODE nke ihe anyị chọrọ ibipụta, anyị nwere ike ịme usoro niile dị mkpa site na ihuenyo nbipute n'onwe ya.
N'oge ebi akwụkwọ na Ihuenyo ahụ na-agwa anyị aha nke ihe e biri ebi, ọnọdụ extruder, ọsọ obibi akwụkwọ,% e biri ebi na oge anyị na-ebi akwụkwọ. Site na nnukwu ihuenyo a, anyị na-atụ uche karịa ozi, ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa, ọ ga-enwe ekele. Parametersfọdụ akụkụ nwere ike ịbụ oge fọdụrụ, mm na gram biri ebi ma fọdụ
N'oge usoro obibi akwụkwọ site na ihuenyo anyị nwere ike ịkwụsịtụ, kwụsị, gbanwee ọnọdụ okpomọkụ na ọsọ obibi. Ọ ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị inwe ike ịbawanye ụba nke ihe ndị na-apụ apụ.
N'oge ibi akwụkwọ
Mpempe akwụkwọ nwere ọtụtụ mmesapụ aka na anyị nwere ike ibipụta otutu ihe na-enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ na anyị ga-enwe ike ibipụta nnukwu iberibe na-enweghị mkpa ime mgbanwe maka ha. N'ihe banyere ibipụta ọtụtụ ihe n'otu oge, iweghachite nke filament na extruder na nkenke na axes na-ahụ na mgbanwe site na otu ihe gaa na nke ọzọ dị ọcha ma zie ezie.
Ọ bụ eziokwu na enwere ike ịkwụsịtụ n'oge a na-ebi akwụkwọ, ọ bụrụgodị na ọ dị mkpa, na-agbanwe filament anyị anaghị akwado ya n'ihi a ga-ahụ oyi akwa nke ejiri kwụsịtụ na ihe a na-ebipụta. Nke a bụ n'ezie n'ihi na nke anụ ahụ Njirimara nke PLA, dị ka oyi akwa na nke anyị na-agbalị rube isi ihe na-adị kwa oyi, njikọ bụghị zuru okè.
Print ọsọ bụ na-akpali nakwa dị ka mgbagwoju nhọrọ. Ee OK onye nbipute nwere ike nyochawa ike ebi akwụkwọ na gbapụrụ ọsọ nke 200mm / s ọbụghị ihe niile nwere ọdịdị anụ ahụ dị mkpa iji iguzogide oke ọsọ dị otú ahụ. Maka ihe ọ bụla, anyị ga-eme ọtụtụ ule ruo mgbe anyị ga-achọta nhazi dị mma. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na anyị ji uru a na-egwuri egwu n'ihi na anyị nwere ike belata oge obibi akwụkwọ.
Otu ihe nkọwa nke anyị na-enweghị ike ịchọta nkọwa bụ nke ahụ oge mbipụta a tụrụ anya site na Cura dị mkpụmkpụ karịa oge a na-ebi akwụkwọ. Anyị chere na nke a bụ n'ihi mgbanwe nke BQ mere na ngwa nbipute femụwe iji belata mkpọtụ n'oge mbipụta.
Mbipụta mkpọtụ larịị
BQ WITBOX 3 2D Printer dị ka ndị na-ebi akwụkwọ niile, na-eme mkpọtụ. Mana enwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche nwere ike imetụta ogo mkpọtụ ọ na-ewe. Mbipụta na oke ọsọ dị elu, ọ bụrụ na anyị ewepụla methacrylate nke dị elu iji debe nkwado nhọrọ filament ọ dị elu, ọ bụrụ na anyị ebipụta ọnụ ụzọ meghere ọ na-ada karịa. Mana ọbụlagodi ọnọdụ kacha njọ enwere, ya na njo niile anyị tụlere ugbu a.
Ọ bụrụ na anyị nwere ya nke dị n'ime ụlọ mechiri ụzọ ya n'ọnụ ụlọ dị n'akụkụ, ọ bụ naanị ntakịrị hum ka a nụrụ. Na ama na ngwa mmụba DB naanị otu ụkwụ site na ngwa nbipute anyị nwere uru n'etiti 47 na 57 dB na mgbe ị na-ahapụ ụlọ ma na-emechi ọnụ ụzọ anyị nwere uru nke 36 dB. Ikwesiri iburu n'uche na ụdị ngwa ndị a edochaghị anya, mana ha na-enye anyị echiche na-adịghị mma.
Bipute ogo na njehie.
Ọ bụrụ na enwere ihe masịrị anyị nke ukwuu maka igwe nbipute a bụ ogo dị elu nke ọ na-ebipụta. Ma na nnukwu mkpebi ma ọ bụ mkpebi siri ike, ibi akwụkwọ ahụ dị ezigbo mma na enweghị njehie. Anyị ebipụtala ule nrụgide dị iche iche na ngwa nbipute gafere ha na enweghị nhịahụ.
Na akụkọ ihe mere eme, BQ enwewo obodo na-arụsi ọrụ ike maka ngwaahịa ya niile nwere ike idozi nsogbu ngwaahịa ọbụlagodi tupu ọrụ ọrụ aka. N'ebe a na-akpọ Mibqyyo forum, e nwere eriri dị iche maka ngwaahịa a nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-esonye ma zaa obi abụọ niile bilitere..
Na mgbakwunye emeputa na-eme ka ndị ahịa ya nwee ekwentị, twitter na ozi iji gbalịa ikpuchi ụzọ niile nke nkwukọrịta. Site na ụzọ ọ bụla anyị na-eji ha ga-enye anyị a ọgwụgwọ zuru oke, ị ga-enyocha ihe ndị kachasị ọhụrụ na ozi iji ghọta ya.
Abụ onye ihe mmeghe mepere emepe abughi ihe di nfe ichota mgbanwe ma anụ ahụ na ngwaike larịị nke ụfọdụ akụkụ nke ngwa nbipute. Emeputa nwere nwere ya ọrụ na Thingiverse Portal. Isi ego ọzọ maka BQ maka ịkwado Open Source !!
Agbanyeghị, anyị na-atụle na enwere ọtụtụ ebe anyị nwere ike ịhụ akwụkwọ na ihe nkwado maka ngwa nbipute; ukara website, ọnụ ụzọ Diwo, obi ụtọ, Youtube. Onye nrụpụta ahụ kwesịrị ịgbalị itinye uche na ozi niile dị ka o kwere mee.
BQ filament na filaments site na ụdị ndị ọzọ.
A na-ebute onye nbipute ya na otu kilogram nke Red PLA Filament. BQ filament dị ezigbo mma maka ịme echiche mbụ ya na ngwa nbipute anyị BQ WITBOX 3 2D. Na-agbaso usoro ikpo okwu nke ọma, na-aga nke ọma na mgbe niile site na onye mmefu. Na ihe ndị e biri ebi, ọbụlagodi obere pasent, ga-enwe ekweghị ekwe. N'aka nke ọzọ, ekweghị ekwe a ga-emekwa ka anyị nwekwuo siri ike wepu ihe owuwu na-akwado ya site na ihe di egwu.
Ogo na ntụkwasị obi nke isi extrusion emeela ka anyị bipụta site na iji filaments dịgasị iche iche site na ndị nrụpụta dị iche iche, na-enweta ezigbo nsonaazụ ha niile.
Nwere ike ịlele ụfọdụ ederede nke anyị bipụtara n'oge na-adịbeghị anya na filaments ndị a:
Anyị na-anwale ihe mkpuchi na filaments osisi site na FormFutura
Anyị na-enyocha filaments nke ụdị dị iche iche nyere site Filament2Print: FilaFlex, carbon fiber, Gold filament na Metalic filament
Anyị na-enyocha PrintedDreams PLA filament, oge a pink filament
El ọnụahịa ukara nke onye nbipute bụ 1690 XNUMX na ụlọ ahịa nke ụlọ ahịa nke onwe ya, ma kesaa ya site na nnukwu ụlọ ahịa kọmputa. Ya mere, ọ dị mfe na ụfọdụ mkpọsa ụfọdụ nke ụlọ ọrụ ndị a, anyị nwere ike ịchọta ya na ọnụahịa dị ala karị.
Mgbe anyị nyochachara onye nbipute ahụ maka ụbọchị 45 ma nwee ya ibipụta ihe karịrị awa 5 kwa ụbọchị, anyị nwere ike gosi na anyị na-arụ ọrụ na ngwa a pụrụ ịdabere na ya, nke mgbe ọtụtụ na ọtụtụ nbipụta na-aga n'ihu na-ebipụta dị ka ụbọchị mbụ. Na a devilishly elu ọsọ na ezigbo ebipụta mkpebi.
N’agbanyeghi na-enweghi akwa di oku, otutu uzo di iche iche nke anyi puru ichota nke na achoghi ihe omuma a, agaghi agha anyi. Anyị anwalela ụdị filaments niile ma anyị nwere ike ịkwado gị na onye nbipute nwere ike ịnweta ezigbo nsonaazụ na nke ọ bụla n'ime ha.
Anyị na-atụ uche Njikọ ikuku na ịdị mfe nke njikwa site na ngwaọrụ mkpanaka.
Nha na ibu nke onye nbipute ga-eme ka ọtụtụ ndị nwere ike ịla azụ ghara inwe ebe ha ga-etinye n'ụlọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị ikpe gị ị ga - enwe otu ndị nwere atụmatụ magburu onwe ya na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Mpaghara mmesapụ aka dị ukwuu
Mepee Isi mmalite
Na-emeghachi nke ọma filaments dịgasị iche site n'aka ndị dịgasị iche iche
Ọnụ ụzọ akpọchi maka nchekwa agbakwunyere
Ọnọdụ azụ nke filament ahụ na-abawanye nbipute nbipute
O nweghi njikọ Wi-Fi
Ọnọdụ nke njikọ njikọ ike adịghị mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Nyocha zuru oke na nyocha nke BQ Witbox 3 2D ngwa nbipute
Enwere m ajụjụ. Akara BQ dị ka ọ dị taa anaghị enye ọrụ nka, ebe ụlọ ọrụ emechiela. Kedu ihe enwere ike ime ndị na -ebi akwụkwọ 3d nke ika a na -enweghị nkwado a?
Dị ka ị na -ekwu, BQ adịkwaghị dị ka nke a, n'ihi mfu akụ na ụba e resịrị ya otu ndị Vietnam, ugbu a ọtụtụ ndị ọrụ ya yiri ka akwụghị ụgwọ na ndị ahịa na -enweghị nkwado teknụzụ. Ruo ogologo oge gara aga, Madrid Smart Labs na -ahụ maka ịnye ọrụ teknụzụ mpụga maka ngwaọrụ BQ, mana mgbe emechiri ụlọ ọrụ ahụ, ha akwụsịkwala inye nkwado n'ihi enweghị ihe.
Site n'aka ndị nwe ugbu a, a na -eche na ha ga -enye nkwado na Spain site na VimSmart ruo BQ nke ka nwere nkwa, mana amaghị m nke ọma ma ọ bụrụ na nke ahụ na -eme, ma ọ bụ ihe ga -eme akụrụngwa nke anaghịzi adị. nwere nkwa ... Echere m na ị ga -eche maka ịrụzi onwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike, ma ọ bụ ịgbanwe akụrụngwa ...
Oroma Pi enweworị ụlọ ọrụ gọọmentị na ngwugwu snap snap